Covid-19 ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း နာမည်ကြီး အဝတ်အစားတံဆိပ်များ အခြေအနေ | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
အခုချိန်ဟာ ကမ္ဘာ့အနှံအပြား ကိုရိုနာရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တာမို့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး နယ်ပယ်ပိုင်းမှာလည်း ခေတ္တရပ်နားထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ Brand တွေအနေနဲ့လည်း ကိုရိုနာကြောင့် ဖြစ်လာမည့် ထိခိုက်မှုတွေကို ရေရှည်တောင့်ခံရမှာပါပဲ။
တချို့နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တွေဆို ကိုရိုနာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရာ ခေတ္တ ငြိမ်သက်မှုကြောင့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် Brand တန်ဖိုး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးနီး စီးပွားရေးရာမှာ ထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဝတ်အထည် လုပ်ငန်းစုတွေထဲမှာဆို Nike က အတော်လေး ကာမိနေပြီး Brand တန်ဖိုး ၇ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတယ် သိရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ Gen Z တွေရဲ့ တိမ်းညွှတ်မှုကြောင့် ထင်ရပါတယ်။
Levi ကတော့ အတော်လေးကို အဆင်ချောနေတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိတယ်သိရပါတယ်။ Rolex ကတော့ ကမ္ဘာ့အတောင့်တင်းဆုံး Brand တစ်ခုပါပဲ။ ဒီတော့ အေးဆေးလေး တောင့်ခံ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုကာလ အတွင်း အရေးပါသော အဝတ်အထည် Brand များ အခြေအနေကို တင်ပြရရင် ...
၁ . Nike
Nike ကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ လုပ်ငန်းစုပါ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ စံချိန်စံနှုန်း၊ ကမ္ဘာအနှံ့ ဈေးကွက်မြင့်တင်ရေး အရောင်းဝန်ဆောင်မှုစတဲ့ နေရာ တွေမှာ Just Do It ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ အတော်လေး ခြေလှမ်းသွက်ပါတယ်။ Nike ရဲ့ Air Max တွေကလည်း လူငယ်တွေကြား ရေပန်းစားနေပြီးသားမို့ Brand တန်ဖိုး ၇ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာ လက်ခံရမှာပါ။
၂ . Gucci
Gucci ကတော့ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ ဖက်ရှင်ပိုင်းကို အဓိကထား ဆန်းသစ်ကာ အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်ပြီး လယ်သာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ၎င်း Brand ဟာ ၁၉၂၁ ထဲက တည်ထောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစုဖြစ်ပြီး တန်ဖိုး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်လာတာ အံသြစရာမရှိပါဘူး။
၃ . Adidas
Adidas ကတော့ ဂျာမဏီက လုပ်ငန်းစုဖြစ်ပြီး Nike နဲ့direct competitor လုပ်ငန်းစုပါ သို့ပေမဲ့ Nike လိုတော့ ပန်းပန်လျက်ရှိမနေနိုင်ပါဘူး တန်ဖိုး ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း နီးနီး ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။
၄ . Louis Vuitton
Louis Vuitton ကတော့ LV ဆိုပြီး သင်တို့ သိထားကြတဲ့ Brand ရဲ့ အရှည်ကောက်နာမည်ပါ။ LV ကတော့ ပြင်သစ် လုပ်ငန်းစုဖြစ်ပြီး ၁၈၅၄ မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အခုချိန်ထိ နာမည်ကို ထိမ်းထားနိုင်တယ်သိရပါတယ်။ တန်ဖိုး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်လာ တွေ့ရပါတယ်။
၅ . Cartier
Cartier ဟာပြင်သစ် Luxuary လုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲ မိသားစု လက်ငုတ်လက်ရင်းလုပ်ငန်းစုဖြစ်ပြီး ၁၈၄၇ ထဲက ထို Brand ကို အစကောင်းခဲ့တာပါ ဒါ့ကြောင့် ယခုအချိန်မှာ တန်ဖိုး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
၆ . Zara
Zara ကတော့ စပိန်နိုင်ငံ ရဲ့ Brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး Fashion ရေးရာမှာ အဝတ်အထည် အသုံးအဆောင်များ ဖြန့်ချီတဲ့ အကြီးစားလုပ်ငန်းစုပါ ယခုအခါမှာတော့ တန်ဖိုး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။
၇ . H&M
H&M ရဲ့ နာမည် အရှည်ကောက်က Hennes & Mauritz AB ပါ။သူက ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ အဝတ်အစား Brand ပါ။H&M ကတော့ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအဝတ်အစားနဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကလေး အဝတ်အထည်တွေ ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့ လုပ်ငန်းအကြီးစားပေါ့။
ယခုအချိန်မှာတော့ တန်ဖိုး ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ကျလာတယ်သိရပါတယ်။
Chanel ကတော့ ပြင်သစ် ဖက်ရှင် Brand တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဇိမ်ခံဖက်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစုပါ သူကတော့ တန်ဖိုး ရာခိုင်နှုန်း အတက်အကျ မရှိနေမြဲ အတိုင်းသာ ဆက်လက်သွားနေပါတယ်။
၉ . Uniqlo
Uniqlo ကတော့ ဂျပန် အဝတ်အထည် လုပ်ငန်းစုပါ ထို့အပြင် ကမ္ဘာအနှံ အပြားကိုအဝတ်အထည်ဖြန့်ချိပါသေးတယ်။၎င်းလုပ်ငန်းစုကို ၁၉၄၉မှာစတင်တည်ထောင်တယ်သိရပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ တန်ဖိုး ၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် တက်လာတယ်သိရပါတယ်။
၁၀ . Hermes
Hermes ကတော့ ပြင်သစ် ရဲ့ နာမည်ကျော် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး 1837 ထဲက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၅၀ ကျော် ခုနှစ်များမှာ မြင်းရုပ် တံဆိပ်လေးနဲ့ ဈေးကွက် မှာ နာမည်ရှိဈေးကြီး ပစ္စည်း Brand အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ တန်ဖိုး ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် တက်လာတယ်သိရပါတယ်။
အထက်မှာ တင်ပြသွားခဲ့သည်များမှာ Brand Finance မှ ထုတ်ပြန်ချက်များပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Business Read 538 times